40 सस्ता समुद्र तट बिदा र शीर्ष5सबै समावेशी रिसोर्ट्स भ्रमण गर्न को लागी
By भिक्टोरिया अकपान टीएमएलटी सेप्टेम्बर 20, 2021 यात्रा0टिप्पणिहरु
- सस्तो समुद्र तट बिदाहरु -
के तपाइँ एक बजेट समुद्र तट छुट्टी मा जान चाहानुहुन्छ? सुन्दर सार्वजनिक समुद्र तटहरु, साथै बजेट को अनुकूल गतिविधिहरु र आवास, एक कम लागत एकल वा परिवार समुद्र तट यात्रा को लागी यी स्थानहरुमा उपलब्ध छन्।
यी परिवारहरु को लागी सबैभन्दा सस्तो समुद्र तट getaways छन्।
35 बिदाहरु को लागी सस्तो समुद्र तट गन्तव्य
यहाँ केही मनपर्ने समुद्र तट गन्तव्यहरु। यी सबै न्यानो मौसम स्पट छन्, र ती सबै एक बजेट मा भ्रमण गर्न सकिन्छ!
नि: शुल्क चीजहरु तपाइँ टक्सन मा गर्न सक्नुहुन्छ
फ्रेस्नो मा गर्न को लागी नि: शुल्क चीजहरु
चीजहरु तपाइँ मेसा मा नि: शुल्क गर्न सक्नुहुन्छ
मुक्त Sacramento मा गर्न को लागी चीजहरु
नि: शुल्क चीजहरु तपाइँ नैशभिल मा गर्न सक्नुहुन्छ
1. Beaufort, दक्षिण क्यारोलिना
यो छ सबैभन्दा सस्तो समुद्र तट रिसोर्ट्स मध्ये एक। ब्यूफोर्ट १ Royal औं शताब्दीको पेरिस पोर्ट रोयल टापुमा अवस्थित छ, यसको वृक्षारोपण को लागी प्रसिद्ध छ, विशेष गरी पुरानो शहर मा।
यहाँ लोकप्रिय गतिविधिहरु निर्देशित टापु बस पर्यटन, माछा मार्ने चार्टरहरु, र डु boat्गा र कयाक यात्राहरु कि समुदाय को समृद्ध इतिहास, गुला विरासत र तटीय तराई को प्राकृतिक सौन्दर्य सहित प्रदर्शन गर्दछन्।
ध्यान केन्द्रित भएकाहरुको लागी समुद्र तट समय आनन्द उठाउँदै, शिकार टापु राज्य पार्क को लागी, जो रेतीले समुद्र तटहरु को5माईल, दलदल को हजारौं एकड़ जमीन, ज्वार का धाराहरु, समुद्री जंगलहरु, र नुन पानी लैगुनहरु को लागी।
२. यर्क, मेन
योर्क मेन मा एक क्लासिक पैरिश हो। यो एक पोस्टकार्ड सही तटरेखा संग आइसक्रिम पसलहरु पुस्ता बाट पुस्ता हस्तान्तरण, र धेरै दर्शनीय देश सडकहरु, स्थानीय स्थलहरु, ग्रामीण दृश्यहरु, र कहिले काहिँ खाडी वा मुहान बाट पारित संग एक विचित्र गाउँ हो।
कयाकिंग, गोल्फि cy, साइक्लि,, र धेरै प्रकृति ट्रेल्स मा पैदल यात्रा यहाँ शीर्ष गतिविधिहरु छन्। त्यहाँ Ogunquit Playhouse र Hackmatack Playhouse सहित क्षेत्र मा विभिन्न गर्मी को थिएटरहरु, छन्।
3. Wellfleet, म्यासाचुसेट्स
Wellfleet एक क्लासिक प्राचीन केप कोड छ, यान्की पत्रिका द्वारा नयाँ इ England्गल्याण्ड मा 25 सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट शहरहरु मध्ये एक नाम। केप कोड नेशनल कोस्ट को प्रभुत्व, केप को टाढा अन्त मा स्थित छ, जमिन क्षेत्र को आधा भन्दा बढी को लागी लेखांकन।
प्राचीन तट परे, त्यहाँ धेरै वसन्त खुवाएका तालाबहरु छन्; कला ग्यालरीहरु, पसलहरु, र रेस्टुरेन्टहरु संग आकर्षक शहर क्षेत्र; र सुरम्य Wellfleet हार्बर, जहाँ निर्बाध नौकायन र याट परेड छन्।
Wellfleet मैसाचुसेट्स Audubon समाज मा १,००० एकर Wellfleet खाडी वन्यजीव शरणार्थी को घर पनि हो।
यहाँ शीर्ष ग्रीष्मकालीन गतिविधिहरु नजिकैको इप्सविच को प्राचीन क्रेन बीच को अन्वेषण र वुडम्यान रेस्टुरेन्ट मा तलाएको clams को एक भोज संग दिन को अन्त्य शामिल छ।
एउटा सानो न्यू इ England्गल्याण्ड शहर मा समुद्र तट जीवन को लागी एक विशिष्ट स्थान को रूप मा, एसेक्स overdeveloped वा भीडभाड भएको छैन।
यो अझै पनी घुमाउने देश सडकहरु र सुरम्य फराकिलो दलदल र मुहानहरु द्वारा प्रभुत्व छ, जो सानो रोइ bo डु bo्गा वा कयाक्स द्वारा पाल्न सकिन्छ।
साथै, यो संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राचीन राजधानी को रूप मा जानिन्छ, र त्यहाँ एक माईल भित्र दुई दर्जन भन्दा धेरै पसलहरु छन्। एसेक्स जहाज निर्माण संग्रहालय आकर्षक फोटो र हस्तशिल्प को एक ठूलो संग्रह छ।
5. Tybee टापु, जर्जिया
यो सस्तो समुद्र तट बिदाहरु मध्ये एक तपाइँ भ्रमण गर्नु पर्छ। Tybee द्वीप एक विचित्र बाधा टापु हो, गर्मी मा रहन को लागी सही।
ऐतिहासिक सवाना बाट २० माईल भन्दा कम टाईबी यसको फराकिलो रेतीले समुद्र तटहरु को लागी प्रसिद्ध छ, स्वादिष्ट स्थानीय खाना, र नुन मार्श चराहरु र वन्यजीव जर्जिया तट को लागी अद्वितीय।
यदि तपाइँ खान चाहनुहुन्न, त्यहाँ माछा मार्ने अवसर र दुई दर्जन भन्दा बढी रेस्टुरेन्ट को धेरै छन्।
6. हिल्टन हेड आइल्याण्ड, दक्षिण क्यारोलिना
हिल्टन हेड एक समुद्र तट समुदाय हो यात्रा र फुर्सत, संयुक्त राज्य अमेरिका आज, र फोर्ब्स सहित प्रकाशनहरु को आफ्नो चकाचौंध सूची को लागी परिचित छ। साथै, हिल्टन हेड सजिलै संग गर्मी को समयमा समय को एक लामो अवधि को लागी आगन्तुकहरु लाई मनोरन्जन गर्न सक्नुहुन्छ।
हिल्टन हेड टापु, १२ माईल समुद्री तट, गोल्फ कोर्स, पैदल यात्रा, माछा मार्ने, कयाकि,, र सयौं रेस्टुरेन्टहरु संग, पहिलो मा थोरै भारी लाग्न सक्छ।
तर सबैले मिलेर काम गरे यो एक टापु रिसोर्ट जस्तै महसुस गर्न को लागी, जानबूझेर उज्यालो सडक बत्ती र फैंसी रंगहरु लाई वेवास्ता गर्दै।
7. गियरहार्ट, ओरेगन
यात्रा र फुर्सत डाटा अनुसार, यो सानो शहर कुनै ट्राफिक बत्ती र फराकिलो सडकहरु संग साइकल यात्रा को लागी एकदम सही छ संयुक्त राज्य अमेरिका मा अर्को शीर्ष समुद्र तट शहर हो।
फुर्सतको गति को अलावा, प्राचीन समुद्र तटहरु, प्राचीन पसलहरु, कला दीर्घाओं, र धेरै पैदल यात्रा अवसरहरु पनि समुदाय लाई यति आकर्षक बनाउँछन्।
South. दक्षिण प्याड्रे द्वीप, टेक्सास
यो सस्तो समुद्र तट बिदाहरु मध्ये एक तपाइँ भ्रमण गर्नु पर्छ।
हुनत दक्षिण पाद्रे एक कुख्यात वसन्त ब्रेक भेला ठाउँ हुन सक्छ, गर्मी भीड लामो समय देखि गायब भएको छ, र समुदाय एक आकर्षक, परिवार को अनुकूल गन्तव्य बन्ने छ।
सेतो बलौटे समुद्र तटहरु, पन्ना हरियो पानी, माछा मार्ने, पानी को खेल, स्यान्डकासल पाठ्यक्रम, र Schlitterbahn पानी पार्क को 55 किलोमिटर छ।
9. क्यारोलिना बीच, उत्तरी क्यारोलिना
क्यारोलिना बीच, मर्टल बीच र नाग हेड को बीच मा स्थित छ, एक शान्त, ढिलो गति, र अधिक किफायती गर्मी को ब्रेक प्रदान गर्दछ, क्लेम बेसन को अनुसार, होटल छुट साइट GoSeek का सीईओ।
स्थानीयहरुका अनुसार अटलांटिक तट मा सबैभन्दा तल पृथ्वी को समुद्र तटहरु मध्ये एक।
क्यारोलिना बीच सवारी र रेस्टुरेन्ट संग रेखांकित एक पुरानो boardwalk को घर हो, एक दैनिक आधारमा प्रत्यक्ष संगीत, सर्फिंग, पैदल यात्रा, र चरा-क्यारोलिना बीच स्टेट पार्क मा हेर्दै - र त्यो मात्र यो परम्परागत अमेरिकी समुद्र तट शहर को सतह scratching छ।
10. सूर्यास्त समुद्र तट, हवाई
ग्रीष्मकालीन छुट्टी लायक समुद्र किनार समुदाय को कुरा गर्दै, हवाई समुद्र तट जीवन को पर्यायवाची हो।
Oahu को उत्तरी तट मा केहि हप्ता बिताउन को लागी सबैभन्दा रमाईलो ठाउँहरु मध्ये एक। सूर्यास्त बीच जाडो मा एक जीवन्त सर्फिंग समुदाय हो तर गर्मी मा लगभग खाली हुन्छ जब लहरहरु लगभग गायब हुन्छ।
यहाँ तपाइँ अविस्मरणीय snorkeling, पैदल यात्रा, र ziplining गर्न सक्नुहुन्छ। सूर्यास्त बीच राज्य पार्क समुद्र तट भ्रमण गर्न को लागी सबैभन्दा राम्रो ठाउँ हो, सूर्यास्त को उल्लेख गर्न को लागी छैन।
11. Avila बीच, क्यालिफोर्निया
सान लुइस ओबिस्पो काउन्टी मा एक असंगठित समुदाय मा स्थित छ, लस एन्जलस को बारे मा दुई घण्टा उत्तर मा, Avila बीच ठूलो शहर मा जीवन बाट बच्न को लागी एक राम्रो ठाउँ हो।
साथै, प्राकृतिक राजमार्ग १ को बाहिर स्थित, यो समुद्री किनार शहर स्थानीय वाइन, समुद्री किनार रेस्टुरेन्ट, र प्राकृतिक खनिज तातो स्प्रिंग्स संग स्पा को लागी प्रसिद्ध छ।
४४४४ आगन्तुकहरु केन्द्रीय तट एक्वैरियम भ्रमण गर्न, बब जोन्स बाइक र पैदल यात्रा ट्रेल्स टहल्न सक्नुहुन्छ, वा मुक्त Avila बीच ट्राम मा क्षेत्र को अन्वेषण, जो समान रूप देखि आकर्षक पिस्मो समुद्र तट को लागी यात्रुहरु ले।
12. रकपोर्ट, टेक्सास
अन्तिम तटीय समुदाय सम्झना एक घाम समुद्र तट बिदा हो। साथै, Rockport को हाइलाइट्स Rockport समुद्र तट, जो एक माछा मार्ने घाट र प्रचुर मात्रा मा पक्षी जीवन, र समुदाय मा विभिन्न कला दीर्घाओं छ।
Rockport कला केन्द्र पाठ्यक्रम, प्रदर्शनी, र मूर्तिकला बगैंचा प्रदान गर्दछ। अर्को उल्लेखनीय साइट टेक्सास समुद्री संग्रहालय हो, जसमा समुद्री डाकूहरु देखि माछा मार्ने तेल ड्रिलिंग सम्म सबै चीज कभर प्रदर्शन छ।
13. Topsail बीच, उत्तरी क्यारोलिना
Topsail बीच Topsail द्वीप को दक्षिणी टिप मा स्थित छ, उत्तरी क्यारोलिना को दक्षिण पूर्वी तट नजिक। साथै, यो एक सानो शहर हो जहाँ तपाइँ तपाइँको आफ्नै आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ समुद्री डाकू समुद्री खाना डिनर यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ.
Topsail २-माईल टापु मा तीन parishes मध्ये एक हो, एउटा सानो शहर को आकर्षण संग। त्यहाँ हुलाक कार्यालय माथि एक आइस स्केटि r रिंक छ। को
मिसाइल र अधिक संग्रहालय (१ 1946 ४ in मा बनेको एक स्थानीय ऐतिहासिक भवन) Topsail टापु को इतिहास को प्रदर्शन गर्दछ। सूर्य र प्रकृति मन पराउनेहरु को लागी, तपाइँ सर्फ, माछा, र आन्तरिक जलमार्ग को अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
14. फोर्ट Bragg, क्यालिफोर्निया
के तपाईं हुनुहुन्छ ऐतिहासिक skunk रेल सवारी, सुन्दर समुद्र तट को माईल टहल, बन्दरगाह को अन्वेषण, वा रेडवुड वन को माध्यम बाट एक दुई व्यक्ति रेल बाइक सवारी, फोर्ट Bragg को आकर्षक समुद्र तट समुदाय मा गर्न को लागी धेरै रोचक र किफायती चीजहरु छन्।
फोर्ट Bragg मेन्डोसिनो, क्यालिफोर्निया को तट मा 6,000 बासिन्दाहरु संग एक सानो शहर हो। यो सानो र अन्वेषण गर्न सजिलो छ।
साथै, यो एक महान ठाउँ शक्ति अनप्लग र छ क्षेत्र को जंगली प्राकृतिक सौन्दर्य को आनन्द लिनुहोस्। सायद सबैभन्दा प्रसिद्ध आकर्षण ग्लास बीच, यसको रंगीन गिलास टाइल्स को लागी प्रसिद्ध छ।
15. पोम्पानो बीच, फ्लोरिडा
स्थानीयहरु भन्न मन पराउँछन् कि गर्मी उनको सबैभन्दा राम्रो राखिएको रहस्य हो। यो तटीय समुदाय मा मौसम सामान्यतया चिसो, हावायुक्त, र पूर्वोत्तर मा आर्द्र गर्मी को तुलना मा सुख्खा छ, र घर को मूल्य मई मा गिर्यो।
४४४४ पर्यटकहरु एक दिन बिताउन सक्छन् पोम्पानो बीच, "गोल्ड कोस्ट को मुटु" को रूप मा परिचित, माछा मार्ने, डुating्गा, डाइविंग, र जीवन्त अपतटीय कोरल चट्टानहरु मा snorkeling।
साथै १,००० फिट शहरी माछा मार्ने घाट र ५० पार्कहरु पैरिश भर मा वितरित गरीएको छ।
१ Gold. गोल्ड बीच, ओरेगन
गोल्ड बीच, दक्षिणी ओरेगन मा, सयौं खानीहरु जो आसन्न तटहरु बाट सुन स for्कलन को लागी नाम दिइएको छ। यो शान्ति र साहसिक संयोजन मा माहिर छ।
साथै, गोल्ड बीच पर्यटकहरु जंगल को अन्वेषण गर्न वा दिउँसो कालो खैरो व्हेल को फलीहरु लाई पार गर्न को लागी देख्न सक्छन्, शान्त समुद्र तटहरु संग घुम्न को लागी, ज्वार पूलिंग, माछा मार्ने, र दुष्ट नदी मा एक जेट डु boat्गा सवारी ले।
प्रशान्त रीफ होटल को रात्रि मनोरञ्जन एक समुद्र तट बाहिरी थिएटर सुविधाहरु.
17. पेन्साकोला खाडी, फ्लोरिडा
तपाइँको सपनाको विषय के हो? दिनहरु चीनी-सेतो समुद्र तट मा lounging बिताए वा दिनहरु गृहयुद्ध भन्दा पहिले बनेको एक किल्ला को हलवे को खोजी मा बिताए? वा सायद यो तपाइँको प्राकृतिक पक्ष संग पुन: जडान छ?
यी सबै र अधिक मा पाउन सकिन्छ पेन्साकोला खाडी क्षेत्र। नि: शुल्क राष्ट्रिय नौसेना उड्डयन संग्रहालय, NAS Pensacola मा स्थित, सबैभन्दा बजेट-अनुकूल गतिविधिहरु मध्ये एक हो।
साथै, गल्फ टापुहरु राष्ट्रिय समुद्री किनार, जो दुबै पेन्साकोला र Perdido कुञ्जी फैलिएको छ र सेतो रेत समुद्र तटहरु, युद्ध किल्लाहरु, र अन्य आकर्षणहरु छन्, अर्को लोकप्रिय गन्तव्य हो। एक पास को लागत प्रति वाहन $ २० हो।
18. Chincoteague टापु, भर्जिनिया
यो सस्तो समुद्र तट बिदाहरु मध्ये एक तपाइँ भ्रमण गर्नु पर्छ। Chincoteague टापु जंगली ponies र Chincoteague को आफ्नो बथान को लागी परिचित छ राष्ट्रीय वन्यजीव शरणार्थी, र यात्रा र फुर्सत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो सानो समुद्र तट शहरहरु को एक नामित गरिएको छ।
त्यहाँ sk माईल टापुमा कुनै गगनचुम्बी भवन वा बोर्डवाक छैन। यसको सट्टा, आगन्तुकहरु अनन्त समुद्र तटहरु, लुभावनी सूर्यास्त, र unspoiled प्राकृतिक परिदृश्य पाउनुहुनेछ।
साइकल, पैदल यात्रा, चरा हेर्ने, र डुating्गा लोकप्रिय गतिविधि होs, जस्तै केकडा र clams छन्। त्यहाँ पनि अन्वेषण र ग्लाइडिंग को लागी एक किसानको बजार छ, अधिक साहसी मानिसहरु को लागी उपयुक्त।
19. Lubec, मेन
यो सस्तो समुद्र तट बिदाहरु मध्ये एक तपाइँ भ्रमण गर्नु पर्छ। Lubec यात्रा र फुर्सत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो समुद्री किनार शहर को रूप मा दर्जा दिईएको छ, र संयुक्त राज्य अमेरिका मा पूर्वी शहर को लागी अद्वितीय छ।
दुई लाइटहाउस, सुरम्य माछा मार्ने स्थल, लगभग १ 160० किलोमिटर को तटरेखा, र अविश्वसनीय प्राकृतिक सौन्दर्य सबै प्रसिद्ध आकर्षण हो।
अधिक संरचित कुराकानी को लागी, पियानो पाठ, फोटोग्राफी पाठ, रचनात्मक लेखन, नृत्य, र अधिक सहित ग्रीष्मकालीन कला कार्यशालाहरु को ग्रीष्मकालीन कुञ्जी चयन को जाँच गर्नुहोस्।
20. रेहोबोथ, डेलावेयर
Rehoboth पर्याप्त छ मनोरन्जन गतिविधिहरु गर्मी को धेरै महिना खर्च गर्न को लागी। साथै, boardwalk बच्चाहरु को लागी अनन्त रमाईलो प्रदान गर्दछ। ४४४४ वयस्क जीवन्त रेस्टुरेन्ट, कला दीर्घाओं, र पसलहरु द्वारा आकर्षित छन्।
रेहोबोथ बीच ब्यान्ड नि: शुल्क कन्सर्ट प्रदान गर्दछ, र रेहोबोथ बीच संग्रहालय पुरानो पोस्टकार्ड र ईयरबुक को माध्यम बाट शहर को इतिहास को प्रदर्शन गर्दछ।
२१. लामो समुद्र तट, वाशिंगटन
लामो समुद्र तट सबै वर्ष दौर लोकप्रिय छ, विशेष गरी गर्मी मा जब क्षेत्र को प्रसिद्ध बरसात को मौसम समाप्त हुन्छ। त्यहाँ ४५ किलोमिटर बालुवा समुद्र तटहरु छन् घाम नुहाउने, पौडी खेल्ने वा सर्फि को लागी।
ग्रीष्मकालीन मनोरन्जन को लागी अन्य उल्लेखनीय विकल्पहरु कोलम्बिया नदी पारिस्थितिक यात्रा, लगभग -०० मिटर लामो Long Beach Boardwalk, र Willapa वन्यजीव अभयारण्य, जुन १,००० बर्ष पुरानो प्राचीन रातो देवदार वनहरु छन्।
22. हन्टिंग्टन बीच, क्यालिफोर्निया
हन्सिington्टनटन बीच यसको प्रसिद्ध उत्तरी छिमेकीहरु (जस्तै सान्ता मोनिका, भेनिस, र लागुना) को तुलना मा धेरै सस्ता छ, GoSeek को बासन भन्छन्।
साथै, हिड्न योग्य शहर केन्द्र स्टाइलिश पसल र उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट छ। तर निस्सन्देह, हन्टिंग्टन बीच समुद्र तट जीवन को लागी सबै भन्दा राम्रो छ, चाहे यो सर्फिंग हो, भलिबल खेल्दै, घाट मा टहल, वा एक क्याम्प फायर संग दिन को अन्त्य।
थप रूपमा, समुदाय समुद्री तटहरु र विश्व स्तरीय सर्फिंग स्पट (उपनाम सर्फ सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका) को १० माईल छ। पाँच समुद्र तटहरु एक पक्की बाटो हिड्ने, दौड, र साइकल को लागी डिजाइन गरीएको द्वारा जोडिएको छ।
२३. खाडी तट, अलबामा
यात्रा प्रकाशनहरु गल्फ कोस्ट को नाम संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक सबैभन्दा आकर्षक समुद्र तट समुदाय, देशको सबैभन्दा underrated छुट्टी गन्तव्यहरु मध्ये एक, र दक्षिण मा सबै भन्दा राम्रो समुद्र तटहरु को एक, र यति मा।
52-माइल समुद्र तट को अलावा, सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षणहरु मध्ये एक गल्फ स्टेट पार्क हो, जसमा पैदल यात्रा ट्रेल्स, कयाक भाडा, रेत टिब्बा मा जिपलाइन, र गोल्फ कोर्स छ।
सडक पार मेक्सिको को खाडी मा दोस्रो ठूलो घाट छ। बोन Secour राष्ट्रीय वन्यजीव शरणार्थी समुद्री कछुवा र प्रवासी चराहरुको घर हो।
24. Kiawah द्वीप, दक्षिण क्यारोलिना
किवाह टापु, चार्ल्सटन नजिकै एक ब्यारियर टापु को तटरेखा मा स्थित छ, पार्कल्याण्ड को १०० हेक्टेयर भन्दा बढि छ, र ४ 100 किलोमिटर पैदल यात्रा र बाइकि tra ट्रेल्स को।
आगन्तुकहरु समुद्री वन को अन्वेषण गर्न सक्छन्; जंगली जनावरहरु पत्ता लगाउनुहोस् कि टापु को दलदल, कछुवा, सेतो पूंछ हिरण, र समुद्री पक्षी सहित बस्छन्। वा एक कयाक वा स्ट्यान्ड-अप paddleboard मा एक साहसिक लिनुहोस्।
यदि तपाइँ दृश्यहरु लाई परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ चार्ल्सटन को लागी जान सक्नुहुन्छ, cobblestone सडकहरु भटकन र प्रभावशाली ऐतिहासिक भवनहरु देख्न सक्नुहुन्छ।
25. Sanibel टापु, फ्लोरिडा
सानिबेल टापु केहि उत्कृष्ट समुद्री शैलहरु को लागी परिचित छ र यसको लुभावनी समुद्र तटहरु को लागी प्रसिद्ध छ, जो नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा सूचीबद्ध गरीएको थियो। समाचार र विश्व रिपोर्ट र धेरै अन्य प्रकाशनहरु पुरस्कार जितेका छन्।
द्वीप एक परिवार मैत्री पर्यटन गन्तव्य को रूप मा मान्यता प्राप्त छ। लोकप्रिय आकर्षण धेरै अन्तरक्रियात्मक प्रदर्शन र Sanibels जेएन संग बेली मैथ्यूज शैल संग्रहालय शामिल छ
"डिंग" डार्लिंग नेशनल वन्यजीव शरणार्थी, जो ५,००० एकड भन्दा बढी कभर छ र दुर्लभ चराहरु, रैकुन, ओटर, र मगरमच्छ को घर हो।
२.. सर्फसाइड, फ्लोरिडा
यो सस्तो समुद्र तट बिदाहरु मध्ये एक तपाइँ भ्रमण गर्नु पर्छ। Surfside मियामी बीच को उत्तर मा स्थित छ र एक शान्त, परिवार को अनुकूल, र भीड र दक्षिण समुद्र तट को मूल्यहरु बिना समुद्रीतट शहर को वातावरण को आराम प्रदान गर्दछ।
आगन्तुकहरु अन्वेषण गर्न को लागी प्राचीन समुद्र तटहरु को १ माईल, साथै शपिंग र बहुसांस्कृतिक रेस्टुरेन्ट को धेरै पाउनुहुनेछ। सर्फसाइड मियामी-डेड मा एक मात्र तटीय समुदाय हो कि शहर भर मा ठूलो मात्रा मा प्रदर्शनीहरु राख्छ, समुद्री जीवन को लागी श्रद्धांजलि।
सर्फसाइड कछुवा को कथाहरु 1.5 मीटर उच्च राल र शीसे रेशा कछुवा मूर्तिकला को एक प्रदर्शनी हो। रंगीन मूर्तिहरु क्षेत्र को मौसमी आगन्तुकहरु को लागी loggerhead कछुवा को जागरूकता बढाउन को लागी डिजाइन गरीएको हो।
27. Pawleys द्वीप, दक्षिण क्यारोलिना
पुलिस द्वीप एक आराम क्यारोलिना तटीय रिसोर्ट पुस्ताहरु को लागी परिचित छ। यो हो सबैभन्दा पुरानो गर्मी रिसोर्ट्स मध्ये एक पूर्वी तटमा (यसको इतिहास १th औं शताब्दीमा फिर्ता पत्ता लगाउन सकिन्छ)।
साथै, टापु कडा मेहनत गरीरहेको छ यसको राखिएको पछाडि समुद्र तट समुदाय वातावरण कायम राख्न। त्यहाँ कुनै चम्किलो नियन रोशनी यहाँ छन्, र तपाइँ लामो लाइनहरु वा भीड पाउनुहुन्न।
समुद्र तटहरु र दलदल को शान्त सौन्दर्य Pawleys को मुख्य आकर्षण हो। पृष्ठभूमि को रूप मा टापु को प्राकृतिक र शान्त वातावरण संग, Pawleys टापु अविस्मरणीय पारिवारिक समय खर्च गर्न को लागी एक आदर्श ठाउँ हो भनिन्छ।
My. मर्टल बीच, दक्षिण क्यारोलिना
एक लोकप्रिय समुद्र तट गन्तव्य, आर्केड बोर्डवाक बाट सेलिब्रिटी गोल्फ कोर्स को लागी सबै चीज प्रदान गर्दछ। सुसमाचार यो छ कि धेरै अविस्मरणीय Myrtle समुद्र तट आकर्षण सस्ती छन्।
बोर्डवाक र -० माईल लामो समुद्र तट को अतिरिक्त, गार्डन सिटी बीच पियर गर्मी को समयमा हरेक रात एक जीवित ब्यान्ड छ।
फ्रैंकलिन जी Burroughs- शिमोन बी Chapin कला संग्रहालय समकालीन कला, जो पनि मुक्त छ प्रदर्शित गर्दछ। मार्टल बीच स्टेट पार्क मा अन्वेषण गरिएको गोलाबारी र प्रकृति ट्रेल्स याद नगर्नुहोस्, प्रति व्यक्ति $ ५ वा कम को प्रवेश शुल्क संग।
पार्क वर्ष भर नि: शुल्क बच्चाहरु को कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
29. फेयर हेवन, न्यूयोर्क
यो सस्तो समुद्र तट बिदाहरु मध्ये एक तपाइँ भ्रमण गर्नु पर्छ। फेयर हेभनको सानो शहर ओन्टारियो ताल (अन्तिम गणना मा लगभग 745 बासिन्दाहरु) मा स्थित छ र एक ताजा पानी समुद्र तट अनुभव प्रदान गर्दछ।
साथै, यो सानो समुदाय शिविर, डुating्गा, माछा मार्ने, र विचित्र किनमेल को लागी एक लोकप्रिय ठाउँ हो।
यो १,१४१ एकर फेयर हेभन बीच स्टेट पार्क को घर पनि हो, जुन प्रति वाहन मात्र $ costs खर्च हुन्छ र गतिविधिहरु माछा मार्ने, कायाकि,, र पैदल यात्रा। पार्क मा एक ४५० मीटर लामो समुद्र तट, एक २०० मीटर संरक्षित पौंडी क्षेत्र सहित छ।
30. राइट्सभिले बीच, उत्तरी क्यारोलिना
राइट्सभिले बीच संयुक्त राज्य अमेरिका टुडे द्वारा उत्तरी क्यारोलिना मा सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट मध्ये एक नामित गरिएको थियो।
अन्य आकर्षणहरु मा जीवंत कक्षाहरु र फ्रेड र एलिस Steinbeck तटीय शिक्षा केन्द्र मा तटीय वन्यजीवन, र Wrightsville बीच इतिहास संग्रहालय मा ऐतिहासिक प्रदर्शनहरु सामेल छन्।
31. सेन्ट मेरी, जर्जिया
सेन्ट मेरी जर्जिया मा एक तटीय शहर हो, प्राय: नजिकैको कम्बरल्याण्ड टापु राष्ट्रिय समुद्री किनार को गेटवे को रूप मा उल्लेख छ, जो जर्जिया टापु मा सबैभन्दा ठूलो र दक्षिणी बाधा हो।
साथै, टापु यसको प्राचीन समुद्री वनहरु, अविकसित समुद्र तटहरु, र विशाल दलदल को लागी प्रसिद्ध छ। कम्बरल्याण्ड टापुमा 9,800, XNUMX०० एकड भन्दा बढी कांग्रेसको निर्दिष्ट मरुभूमि छ।
त्यहाँ ४,४४४ पर्यावरण पर्यटन विकल्पहरु छन्, औपनिवेशिक तटीय पक्षी हेर्ने ट्रेल्स सहित। बाटो मा धेरै स्थानहरु १ bird औं र १ th औं शताब्दी बाट चरा हेर्ने र ऐतिहासिक स्थलहरु प्रदान गर्दछन्।
२ सान जुआन, पोर्टो रिको
क्यारिबियन को पुनर्जागरण छोरा को रूप मा, प्यूर्टो रिको पर्यटन उद्योग लगातार तुफान भन्दा पहिले आफ्नो सामान्य स्थिति मा फर्किदै छ। सैन जुआन क्यारेबियन मा सबैभन्दा सस्तो समुद्र तट बिदाहरु मध्ये एक प्रदान गर्दछ।
साथै, एक थपिएको बोनस को रूप मा, समुद्र तटहरु को माइलहरु आराम छन्, भीडभाड छैन। जब तपाइँ घाममा हुनुहुन्न, तपाइँ स्पेनिश किल्ला र पुरानो सान जुआन, एक युनेस्को विश्व विरासत स्थल को cobbled सडकहरु सहित धेरै स्थलहरु, अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
33. Clearwater बीच, फ्लोरिडा
यो सस्तो समुद्र तट बिदाहरु मध्ये एक तपाइँ भ्रमण गर्नु पर्छ। क्लियरवाटर बीच एकै नाम को यसको चौडा सेतो बालुवा समुद्र तट को लागी प्रसिद्ध छ, धेरै माईल को लागी फैलिएको छ, र बारम्बार देश मा सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट भोट गरीएको छ।
समुद्र तट यसको समुद्र तट सैर र पियर 60 को हलचल को कारण गतिविधि को केन्द्र हो। समुद्र तट पछाडि, Clearwater जोली ट्रली (मात्र $5को लागी असीमित पास) समुदाय को अन्वेषण को लागी एक रमाईलो तरीका हो।
पुरानो ओक कार्टहरु शहर Clearwater, Shakey टापु, र उत्तरी Pinellas, Dunedin, पाम हार्बर, र Tarpon स्प्रिंग्स को रूप मा आसपास को तटीय शहरहरु लाई शहर मा लैजान्छन्।
34. केप मे, न्यू जर्सी
"अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो समुद्र तट रिसोर्ट" भएको दाबी गर्ने एक समुदायले आफ्नो रंगीन भिक्टोरियन घरहरु र ऐतिहासिक स्थानहरु को राष्ट्रीय रजिस्टर मा सूचीबद्ध ऐतिहासिक जिल्लाहरु को लागी एक इन्स्टाग्राम गोल्ड पुरस्कार कमायो।
यस क्षेत्रमा १ th औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो आधा काठको भवनहरु मध्ये एक छ। दक्षिणी न्यू जर्सी को टिप मा यो छिमेक याद गर्न को लागी छैन।
यो प्राचीन समुद्र तटहरुको घर पनि हो, हिग्बी बीच बाट गरीबी बीच सम्म। केप मे लाइटहाउस डेलावेयर खाडी र अटलांटिक महासागर को आश्चर्यजनक दृश्यहरु प्रदान गर्दछ।
35. डेल्रे बीच, फ्लोरिडा
Delray बीच हलचल Boca Raton र पश्चिम पाम बीच को धनी समुदायहरु को बीच स्थित छ। यो एक पटक संयुक्त राज्य मा सबैभन्दा रोचक शहर भोटिएको थियो।
शहर परिवार मैत्री उत्सवहरु र एक जीवन्त कला दृश्य को लागी प्रसिद्ध छ। त्यहाँ 20 भन्दा बढी दीर्घाओं र शहर को केन्द्र मा कला को सार्वजनिक कार्यहरु छन्।
Delray र Wakodahatchee Wetland पार्कहरु पनि प्राचीन समुद्र तटहरु को २ माइल छ, जहाँ एक तीन चौथाई माईल उन्नत boardwalk छ जहाँ तपाइँ चराहरु, कछुवा, र गोही को दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ।
शीर्ष5संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै समावेशी रिसोर्ट्स
निम्न संयुक्त राज्य अमेरिका मा दस रिसोर्ट्स को एक सूची हो कि या त छन् सबै समावेशी वा विशेष प्याकेज प्रदान गर्नुहोस् र पदोन्नतिहरु कि सबै समावेशी रिसोर्ट्स मा पाईने सुविधाहरु को धेरै समावेश गर्दछ।
1. बंगला कुञ्जी लार्गो, फ्लोरिडा मा कुञ्जी लार्गो
परम रोमान्टिक पलायन यो वयस्क मात्र फ्लोरिडा सबै समावेशी रिसोर्ट मा छ। प्रत्येक विशाल बंगला एक बाथटब, फ्लैट स्क्रीन स्मार्ट टिभी, र बाक्लो कुशन गद्दे संग आरामदायक बेड संग एक निजी बालकनी छ।
समुद्र तट मा एक योग कक्षा लिनुहोस्, एक निजी tiki डु on्गा मा खाडी मा फ्लोट, वा होटल मा छ रेस्टुरेन्ट मध्ये एक मा भोजन। 4,444 साइकल, दैनिक समूह योग कक्षाहरु, विभिन्न पौंडी पोखरी र भँवर, र एक साइट स्पा (उपचार लागत को लागी अतिरिक्त भुक्तानी) संग पाहुनाहरु प्रदान गर्नुहोस्।
2. क्लार्क, कोलोराडो मा भिस्टा वर्डे अतिथि खेत
भिस्टा वर्डे अतिथि खेत एक ग्रामीण जीवन शैली बाँच्न सक्नुहुन्छ जबकि आश्चर्यजनक र विलुप्त विलासिता को आनन्द लिइरहनुभएको छ। यो ऐतिहासिक खेत कोठा मा एक टेलिफोन, टिभी, वा इन्टरनेट छैन, त्यसैले अतिथिहरु विच्छेदन गर्न सक्नुहुन्छ।
पौंडी पोखरी, मनोरम सार्वजनिक विश्राम क्षेत्र, फिटनेस क्षेत्र, इनडोर सवारी क्षेत्र, र उच्च ऊँचाई रस्सी कोर्स संग बच्चाहरु को क्षेत्र।
३. हौली, पेन्सिलभेनिया मा वुडलोच पाइन्स रिसोर्ट
यो परिवार द्वारा संचालित रिसोर्ट एक न्यानो र मैत्रीपूर्ण तरीका मा पाहुनाहरु लाई स्वागत गर्दछ र धेरै अवसरहरु संगै पुरानो शैली को रमाईलो संग रमाईलो गर्न को लागी छ।
साथै, यो रिसोर्ट गतिविधिहरु को आफ्नो ब्याज को सबै प्रकार को पूरा गर्न को लागी विस्तृत श्रृंखला को लागी प्रसिद्ध छ।
Woodloch पाइन रिसोर्ट पनि च्याम्पियनशिप गोल्फ कोर्स र एक विश्व स्तरीय स्पा प्रदान गर्दछ।
भित्री र बाहिरी पौंडी पोखरी, पर्खाल चढाई, कयाकि,, स्नोशूइ, रात मनोरन्जन, र अन्य सुविधाहरु।
लिटिल सेन्ट सिमन्स टापु, जर्जिया मा लज
लिटिल सेन्ट सिमन्स टापु मा सबै समावेशी होटलहरु शान्त, एक्लोपना र प्राकृतिक सौन्दर्य खोज्ने पाहुनाहरु को लागी आदर्श छन्।
योसँग ११,००० हेक्टर भन्दा बढी जमिन र ११ किलोमिटर भन्दा बढी निजी समुद्री तटहरु छन्, तर यसले मात्र ३२ जनालाई एकै समयमा बस्न अनुमति दिन्छ।
रमाईलो गर्न चाहनेहरुको लागी एक सुखद वातावरण मा व्यक्तिगत उपचार, यो आदर्श गन्तव्य हो.
यो साइट मा शेफ, डुats्गा बाट र टापु बाट डुats्गा, र दैनिक प्राकृतिक इतिहास पर्यटन द्वारा तैयार भोजन प्रदान गर्दछ।
5. क्लब मेड स्यान्डपाइपर खाडी पोर्ट सेन्ट लुसी, फ्लोरिडा मा
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सक्रिय परिवारहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो सबै समावेशी रिसोर्ट्स को रूप मा, यो रिसोर्ट यो सबै छ।
क्लब मेड Sandpiper खाडी, कैरेबियन मा धेरै अन्य सबै समावेशी रिसोर्ट्स जस्तै, आगन्तुकहरु पूल द्वारा आराम गर्न को लागी, पानी को खेल मा भाग लिन को लागी, र धेरै भन्दा धेरै खान र पिउन को लागी अनुमति दिन्छ।
अनुभवी कोच सहित खेल सुविधाहरु, बच्चाहरु क्लब र आउटडोर पौंडी पोखरी.
हामी आशा गर्दछौं कि तपाइँ यो लेख मन पराउनुहुन्छ र उनीहरुलाई सस्तो समुद्र तट बिदाहरु को रूप मा पनि मानीन्छ र हामी आशा गर्दछौं कि यो तपाइँको लागी धेरै उपयोगी थियो।
यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न वा सुझाव छ भने, कृपया एक टिप्पणी छोड्नुहोस् र यो पनि राम्रो छ, तपाइँका साथीहरु संग यो लेख साझा गर्नुहोस्।
टैग:सस्तो पारिवारिक समुद्र तट छुट्टिहरु, समुद्र तट छुट्टी सौदा २०२१, जोडीहरु को लागी हामी मा सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट छुट्टीहरु, संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट छुट्टिहरु, सस्तो समुद्र तट बिदाहरु सबै समावेशी, मेरो नजिक सस्तो समुद्र तट छुट्टिहरु, दुई को लागी सस्तो छुट्टी, सप्ताहन्त समुद्र तट getaways मेरो नजिक
Lyft को लागी क्रेडिट कार्ड तपाईलाई पुरस्कार र यात्राहरूको लागि कमाउन मद्दत गर्न
जोडीहरु को लागी एक महान विश्राम को लागी पेरिस मा सर्वश्रेष्ठ रोमान्टिक होटल
के डेल्टा माइलहरू खरीद गर्नु राम्रो विचार हो? के तपाइँ जान्न आवश्यक छ
भिक्टोरिया अकपान टीएमएलटी
भिक्टोरिया Akpan Uyo, Uyo, नाइजीरिया विश्वविद्यालय बाट संचार कला मा स्नातक डिग्री छ। उनी एक स्वतन्त्र रचनात्मक र ब्लग सामग्री निर्माता हुन्।
एक टिप्पणी थप्न
सबै समयका सर्वश्रेष्ठ र्याप एल्बमहरू र 13 सर्वश्रेष्ठ कान्ये वेस्ट एल्बमहरू
अद्भुत गुण र कार्यहरु संग पुरुषहरु को लागी सर्वश्रेष्ठ अनुहार धुने
खाना, पिज्जा र अन्य शाकाहारी खानाहरु को लागी रोम मा सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्ट
संसारको सबैभन्दा सुन्दर रूखहरु र उनीहरुको शानदार सुविधाहरु
संसार भर मा सबैभन्दा सुन्दर पुस्तकालयहरु र जहाँ उनीहरु लाई खोज्न को लागी
सनट्रस्ट ब्लग प्रतिलिपि अधिकार © 2021।
विषय द्वारा MyThemeShop.	शीर्ष Back मा फिर्ता